स्तन र स्वर मध्ये एक छान्न भने तपाईंको रोजाइ के हुन्छ भन्दा ज्योतिले दिईन यस्तो जवाफ – Todays Nepal
स्तन र स्वर मध्ये एक छान्न भने तपाईंको रोजाइ के हुन्छ भन्दा ज्योतिले दिईन यस्तो जवाफ
१ तपाईं स्वरमा नजमेपछि शरीर प्रदर्शन गरेर टिकेको कलाकार हो । जुन बेला ज्योति मगरका बारेमा आलोचना हुन थाले, ज्योति मगरका स्कर्टका कुरा हुन थाले त्यतिबेला मेरा २–३ वटा गीत बजारमा हिट भइसकेका थिए । ‘उही मुलाको सिन्की’, ‘जिम्माल बाउकी छोरी’, ‘मलाई उत्ताउली नभन’ गीत हिट थिए । युट्युबमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी भ्युअर्स कमाएको नेपाली लोकदोहोरी गीत सायद मेरो ‘उही मुलाको सिन्की’ नै हो । ‘उही मुलाको सिन्की’ रामचन्द्र काफ्लेसँग गाएको हुनाले कतिपयले उहाँकी श्रीमती अर्थात् गायिका जुनुको स्वर पनि ठान्दा रहेछन् । धेरैले मलाई यो त जुनु रिजालको गीत होइन भनेर सोध्थे पनि । अर्को कुरा, स्वरमा जम्नुअघि नै म स्टेजमा जमिसकेकी थिएँ । २०६३ सालमा काठमाडौंमा प्रवेश गरेकी म एक वर्षको संघर्षपछि नै व्यस्त हुन थालेँ । १२ वर्षको अवधिमा मैले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । कुनै महिना छैन, जहाँ मैले स्टेज नपाएको होस् । त्यसैले यो अभियोग अस्वीकार गर्छु ।
यो त काल्पनिक कुरा हो । म नपिउने होइन, पिउँछु तर जिन्दगीमा एकचोटी बाहेक पिएर बेहोस भएको छैन । कसैलाई लडेर अर्थात् चिप व्यवहार देखाएर दुःख दिएको छैन । सायद जातले पाएर पनि होला, म पिउँदा पनि आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छु । मलाई लाग्छ पिएर पनि नढल्ने, जे पायो त्यही नबोल्ने मान्छे सायद यो संसारमा मै हुँ । त्यसैले साथीहरु पनि अचम्म मान्दै सोध्ने गर्छन्, ‘तँ कहिल्यै झ्याप हुँदैनस् ?’ एकपल्ट मलेसियामा कार्यक्रमका लागि जाँदा कलाकारहरु मिलेर सेलिब्रेसन गर्दै गरेको पर्सनल भिडियो सार्वजनिक भएकाले होला, धेरैलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ । त्यो भिडियोमा रमाइलो गरिरहेका थियौं तर हातमा बियर लिँदैमा झ्याप छ भन्न मिल्छ र ? मगरको छोरी हुँ यार, रक्सीले कहाँ त्यति सजिलै लाग्छ ! शुक्रवार बाट
दुखद खबर : २७ वर्षीया आमाको मृत्यु, दुई छोरी र सात महिनाका एक दुधे बालकको विचल्ली गाउँ शोकमग्न
पाथीभरा माताकी जय : जेठ २५ गते शुक्रबारको राशिफल यस्तो छ